केपी शर्मा ओली: प्रधानमन्त्रीले गैँडा र सगरमाथाबारे गरेको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा चुनौती र कटाक्ष – PanchKhal Online
Home/समाचार/केपी शर्मा ओली: प्रधानमन्त्रीले गैँडा र सगरमाथाबारे गरेको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा चुनौती र कटाक्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार राजधानी काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा सगरमाथा र गैँडाबारे गरेको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सामाजिक टिप्पणी गरेका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) एशिया प्रशान्त क्षेत्रका महानिर्देशकहरूको सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले सगरमाथालाई ‘माउन्ट एभरेस्ट’ र गैँडालाई ‘राइनो’ को साटो नेपाली नाम नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
अङ्ग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले व्याङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। कोहीकोहीले त्यसलाई अनावश्यक र हास्यास्पद पनि मानेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा शेअर गरिएको भिडिओमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सगरमाथाको देश भएकाले त्यही नामलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
उनले विगत १० वर्षमा नेपालले बाघको सङ्ख्या दोब्बर पारेको र दक्षिणी क्षेत्रमा गैँडाको संरक्षण गरिरहेको पनि बताएका थिए।
ओलीले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, “नेपाल सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ त्यसको अर्थ माउन्ट एभरेस्टको देश। म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु – माउन्ट एभरेस्टको वास्तविक नाम सगरमाथा हो र हामी माउन्ट एभरेस्टको भन्दा सगरमाथाबारे कुरा गर्न मन पराउँछौँ।”
उनले नेपालमा धेरै अग्ला चुचुराहरू रहेको पनि बताए। त्यसपछि उनले गैँडाको प्रसङ्ग निकाल्दै भने, “हामीसँग त्यस्तै गैँडा भन्ने शब्द पनि छ। तपाईंहरूलाई थाहा छ गैँडा भनेको के हो? तपाईंहरूले गैँडालाई राइनो भनेर चिन्नुहुन्छ, राइनोहरू राइनो होइनन्, गैँडा हुन्।”
“म तपाईंहरूलाई आग्रह गर्छु – तपाईंहरू यो शब्द सम्झनुहोस्। मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ जहाँ गैँडा छैन उनीहरूले आफ्नो सजिलोका लागि त्यसको नाम राइनो बनाइदिए। तर गैँडा भनेको गैँडै हो। त्यो नेपाली दक्षिणी भेगमा धेरै राम्ररी संरक्षित छ।”
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै नाम चाहिँ अङ्ग्रेजीको छोटकरी रूप (केपी) राख्ने तर गैँडालाई राइनो भन्न नहुने भन्दै ट्वीट गरेका छन्।
कसैले उनलाई अङ्ग्रेजीमै प्रत्युत्तर पनि फर्काएका छन्। एकजनाले अरूलाई नेपाली नाममा अभिव्यक्त गरे पनि ट्विटरलाई नै के भन्ने? भनेर प्रश्न गरेका छन्। शिशिर भण्डारीले ओलीले गैँडा नहुनेहरूले राइनो भनेको कुरालाई समर्थन गरेजस्तै गरी लेखेका छन्, “नभाएको छोराछोरीको न्वारन गरे जस्तै।”
राजकुमार बुढाथोकीले अलि फरक खालको धारणा राखेका छन्। उनले गैँडालाई राइनो र सगरमाथालाई सगरमाथा नै भन्न सुझाएका छन्। तेज ठकुरीले अङ्ग्रेजी भाषा मोहले नेपालमै बालबालिकाहरूले नेपाली भाषा बिर्सन थालेको सम्झाएका छन्।
अनीश पराजुलीले चाहिँ चितवनमा देखिएको गैँडाको भिडिओ प्रेषित गरेका छन्। कतिले नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि गैँडा पाइने बताएका छन्। केहीले प्रधानमन्त्रीलाई उनकै शब्द फर्काउँदै ट्विट गरेका छन्। एक जानले अब गैँडा चुरोटको माग बढ्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
केहीले भने गैँडा पाइने स्थानका रैथाने थारू समुदायले सो जीवनलाई खगाहा भन्ने गरेका र नेपालीमा सगरमाथा नामकरण हुनुभन्दा पहिला सो हिमाललाई तिब्बती भाषामा चोमोलोङ्‌मा भनिने भएकाले नेपाली शब्दको प्रयोगलाई के भन्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्।